Ny Hebreo na Hebrio dia vondrom-poko semitika izay nifindra avy any Mesopotamia na Mezôpôtamia nankany Palestina tamin’ny taonarivo faharoa tal. J.K. Izy ireo no heverina fa razamben'ny Jiosy na Jody ankehitriny.
Araka ny Baiboly dia avy any Kanaana ka nankany Egipta (na Ejipta) ny ampahany amin’ireo Hebreo, dia ireo taranak’i Jakoba, atao hoe Israelita na Zanak’i Israely, ka lasa andevon’ny Egiptiana (na Ejipsiana). Rehefa afaka tamin’ny fanandevozana izy ireo teo ambany fitarihan’i Mosesy (na Môizy) dia nivezivezy tany an-tany efitr'i Sinay hankany Kanaana indray. I Josoa (na Jôsoe) no nandimby an’i Mosesy alohan’ny hanafihany sy honenan’ny Hebreo tao amin’ny tany Kanaana atao hoe koa Palestina.
3 Ny Finoan'ny Hebreo
4 Ny tantaran'ny Hebreo araka ny Baiboly
Ao amin’ny Baiboly, araka ny Bokin'ny Genesisy na Jenezy, ny teny hoe Hebreo na Hebrio dia enti-manondro an’i Abrahama (Gen. 14.13). Midika hoe "mpandehandeha" ny anarana hoe Hebreo izay nomen’ireo Amorita azy ireo. Ireo taranak’i Jakoba nankany Egipta dia mbola atao hoe Hebreo. Ao amin’ny Genesisy (Gen. 40.15) dia nanazava tamin’ireo Egiptiana i Josefa fa nangalarina avy any amin’ny "tanin’ny Hebreo" ny tenany. Ao amin’ny Bokin'ny Eksodosy na Eksaody (Eks. 2.6) dia fantatry ny zanakavavin’i Farao (na Faraona) fa iray amin’ireo zanaky ny Hebreo i Mosesy.
Amin’ny ankapobeny ny hoe Hebreo dia manondro ny taranak’i Ebera (עֵבֶר / ’Ever na ’Eber), taranak’i Sema, hatramin’i Abrahama sy ny taranany ka hatramin’ny fanombohan’ny fitondram-panjaka tany Kanaana. Ny Genesisy 10.20 dia milaza fa i Sema no rain’ny zanak’i Ebera.
Ao amin'ny Bokin'ny Deoteronomia na Deoterônômy (Deo. 26. 5), i Iahveh (Jehovah na Iahve) dia nandidy ny Hebreo mba hanonona mandritra ny fetin'ny Lohavokatra ny fehezanteny hoe: "Ny raiko dia Arameana mpirenireny".
Ny manam-pahaizana sasany dia milaza fa avy any amin’ny tany efitr’i Sinay fa tsy avy any Mesopotamia ny Hebreo. Mety ho avy amin’ny teny egiptiana tranainy hoe habiru izay midika hoe "mpirenireny" ny hoe hebreo. Ny hoe Apiru mitovitovy fanonona amin’io, izay soratana koa hoe Hapiru na Habiru, dia hita tamin’ny soratra tany Mesopotamia sy Anatolia ary Egipta ka manondro ny mpirenireny na indraindray ny mpikaraman’ady na ny jiolahy. Hita tao amin’ny vato fisaka misy soratra miendri-pantsika tao Telalarma ao Egipta voasoratra tany amin’ny taona 1400 tal. J.K. io anarana io. Mety ho avy amin’ny Amorita sy ny Hitita ny Hebreo.
Ny Apiru anefa manana anarana avy amina foko isan-karazany, ka tsy foko tokana fa maro. Ny Hebreo ao amin’ny Baiboly izany dia mety ho ny iray amin’ireo foko atao hoe Apiru ireo.
Ny Finoan'ny HebreoHanova
Nivavaka tamin’ny Andriamanitry ny razany ny Hebreo. Ny mpandinika ny fivavahana dia manao azy ireo ho henoteista tany am-piandohana, izany hoe manana ny andriamanitra tokana ivavahany izy nefa manaiky ny fisian’ny andriamanitr’ireo firenena hafa izay heveriny fa fahavalon’ny andriamaniny. Izany no atao hoe Iahvisma (na Iahvisma).
Tany am-pahababoana any Babilona izy ireo vao nihevitra an’ireo andriamanitry ny firenen-kafa ho tsy andriamanitra ka lasa monoteista hentitra amin’izay ny fivavahany, dia ny Jodaisma izany. Tsy misy andriamanitra afa-tsy ny andriamaniny, dia i Iahveh (na Jehovah). Tamin’izany dia efa natao hoe Yehudhi (izay notononin'ny Malagasy hoe Jody na Jiosy) izy ireo.
Ny tantaran'ny Hebreo araka ny BaibolyHanova
Araka ny Baiboly sy ny lovantsofina jiosy, ny Hebreo dia avy any Mesopotamia, any Oran’i Kaldea. Olona mpifindrafindra monina izy ireo, ka nonina anaty trano lay, niompy osy aman’ondry, sady nampiasa boriky sy apondra ary rameva amin’ny fitaterana. Noho ny fahasarotam-piainana dia nandao ny tanànany ho any Haràna, any an-dohan’i Eofrata, i Tera rain’i Abrahama. Avy eo dia nifindra nankany amin’ny tanin’i Kanaana, izay voalazan'ny Baiboly fa nampanantenain’Andriamanitra ny taranany, i Abrahama.
I Abrahama sy ny olona niaraka aminy dia nonina ao amin'ny tapany atsimon’i Kanaana. Nifangaro tamin’ireo tompontany izy ireo ary lasa mpamboly sy mpiompy miorim-ponenana. Avy amin’ireo razambe hebreo ireo no nipoiran’ny Edomita, ny Moabita, ny Amonita, ny Ismaelita ary ny Israelita. Ataon’ny Baiboly hoe vahiny ireo Hebreo voalohany nonina tao Kanaana ireo raha mitaha amin’ny mponina tao an-toerana. Mpiandry ondry aman’osy izay efa tsy dia mifindrafindra monina intsony fa mihamitomoetra amin’izay ireo Hebreo izay nitady toerana fihinan’ny bibifiompiny. Nonina nanakaiky ny tanan-dehibe izy ireo sady nifandray tsara amin’ny ankapobeny tamin’ireo tompon-tany. Nivelona tamin’ny vokatry ny asany izy sady tsy nety nanambady vehivavy kanaanita. Nitsitokotoko isam-pianakaviam-be (bêyt’âb) na foko (mishpâhâh) izy ireo ka samy nitazona ny maha izy azy manokana sy ny fomban-drazany avy, toy ny fivavahana amin’ny Andriamanitry ny razany.
Nisy kere izay nahatonga azy ireo handao an’i Kanaana ka hankany Egipta mba hitady hanina sy hivelona any. Lasa andevo anefa izy ireo taty aoriana. Nanampy azy ireo hitsoaka an’i Egipta i Mosesy (na Môizy) tamin’ny alalan’ny fidiran’i Iahveh an-tsehatra. Niampita ny Ranomasina Mena ireo Hebreo ireo nankany amin’ny tany efitr'i Sinay. Araka ny Baiboly dia nomen’Andriamanitra ny Vatofisaky ny Lalàna avy eny amin’ny Tendrombohitra Sinay (na Horeba) i Mosesy avy eo nitondra ny Hebreo (Zanak'i Isiraely) namakivaky ny tany efitr'i Sinay nandritra ny 40 taona hankany amin'ny tanin’i Kanaana. Maty i Mosesy ka i Josoa (na Jôsoe) mpanampy azy sady mpianany no nandimby azy ka niditra sy naka ny tany Kanana. Firenena fito no nonina tao Kanaana (Jos. 9-11) tamin'izany fotoana izany.
Tamin’izany no nanombohan’ny faha-mpanjaka ka i Saoly no nisantatra ny fitondrana an'i Israely. Nandimby azy i Davida. Ny fanjakan’i Solomona (na Salômôna), izay nanao an’i Jerosalema ho renivohitra sady nanorina ny Tempoly nisy ny Fiaran’ny Fanekena, dia nanomboka tamin’ny taona 970 hatramin’ny 930 tal. J.K.
Nisaraka roa ny fanjakana ka ny iray, atao hoe Fanjakan’i Jodà, dia naharitra hatramin’ny taona 587 tal. J.K. fa ny iray, atao hoe Fanjakan’i Israely (na Fanjakan'i Samaria), dia naharitra hatramin’ny taona 722 tal. J.K. Nihanalemy noho io fivakisana io ny Israelita ka resin’ny mpanjaka avy any Persia izay nanao sesitany azy ireo tany Babilona.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hebreo_(vahoaka)&oldid=993802"
Dernière modification le 26 Jiona 2020, à 05:00
Voaova farany tamin'ny 26 Jiona 2020 amin'ny 05:00 ity pejy ity.